Art is My Life: 2007
စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်သုံးရက်ကလေ . . ..
မနက်ကို ကျောင်းသွားမလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ပိုက်ဆံအိတ်က ဟောင်းလောင်းကြီး ဟိုနားရှာ ဒီနားရှာလုပ်တော့ ပိုက်ဆံ သုံးဆယ်ရတယ်။ အဲဒီ မြန်မာငွေ သုံးဆယ်နဲ့တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး ဆိုပြီ အိပ်နေတဲ့ တစ်ကောင်ကို နိုး ပိုက်ဆံ ချဉ်းတော့ တစ်ထောင်တန်းလေး တစ်ရွက်ထုတ်ပေးတယ်။ အဲဒီတစ်ထောင်တန်း လေးကို ဘောင်ဘီ အိတ်ထဲ ထည့်ပြီး ၄၈ မီနီဘတ်ပေါ် တက်လာခဲ့တယ်။
ကားခပေးမယ်လို့ ထုတ်လိုက်တော့ ဘောင်ဘီ အိတ်ထဲက ခြင်္သေ့က ဘယ်နားလေး ခုန်းဆင်းနေခဲ့လဲ မသိဘူး။ မရှိတော့ဘူးဗျာ။ အဲဒီတော့ သိလိုက်ပြီ သောက်ရှက်ကတော့ ကွဲကိန်းဆိုက်တော့မယ်။ အရှက်တော့ အကွဲမခံဘူးဗျို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဘေးလွယ်အိတ် ထဲလက်နိုက် တောင်စမ်းမြောက်စမ်း လုပ်လိုက်တယ်။ အဲလို စမ်းတာလည်း ကြာရော ကားစပါယ်ရာ မစောင့်နိုင်လို့ အရှေ့ဆက်သွာတယ်။
စမ်းတာစမ်းနေရတာ သိနေတာပဲလေ။ ကိုယ့်အိတ်ထဲမှာ မြန်မာငွေ သုံးဆယ်ပဲ ပါလာတာကိုး။ စမ်းလဲ မထူးပါဘူး။ နောက်တော့ စမ်းရင်းစမ်းရင်း အ၀ိုင်းလေ သုံးခုကို သွားစမ်းမိတယ်။
သတိရပြီ။ တရာတန် အကြွေစေ့လေး သုံးခု။ လိုချင်လွန်းလို့ ရုံးက ကောင်ဆီက ခိုးထားတာ။ စပါယ်ရာလဲ အနားလည်း ပြန်ရောက်ရော စောစောက အကြွေသုံးစေ့ထဲက တစ်စေ့ပေးလိုက်တယ်။ စပါယ်ရာက အကြွေစေ့လေးကို သဘောကျပြီး ယူသွားလေရဲ့။
အဲဒီအကြွေစေ့တွေက ကျွန်တော့်လက်ထဲကို လွယ်လွယ်နဲ့ ရောက်လာ တာတော့မဟုတ်ဘူး။ ရုံးက တစ်ကောင်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ရလာတာ။ အဲဒါကို ကျွန်တော် မြင်တော့ လိုချင်တယ်။ လိုချင်လို့ တောင်းတော့ သူကမပေးဘူး။ မပေးတော့ ၀ယ်တယ်။ တစ်စေ့ တစ်ထောင်တဲ့။ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်နဲ့ မပေးဘူး။ သူအိပ်မှ အသာလေးခိုး ထားလိုက်တယ်။
သူအကြွေစေ့တွေ ပျောက်တာကို ချက်ခြင်း မသိသေးဘူး။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် နေမှသိတာ။ ပျောက်မှန်းလဲ သိရော ကျွန်တော်ခိုးမှန်း တန်းသိတယ်ဗျ။ လာမေးသေးတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဟောက်လွတ်လိုက်တော့ ထပ်မပေးရဲတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလူနဲ့ ဒီလူရှိတာ။ ကျွန်တော်မယူရင် ဘယ်သူမှ မယူမှန်းသိပေမယ့် သိပေမယ့် သက်သေ မရှိတော့ လှည့်သွားလေရဲ့။
ကျောင်း အပြန်ကျတော့လဲ ဘာထူးမှာလဲဗျာ ကျန်တဲ့ အကြွေစေ့လေး နှစ်ပါးသွားခဲ့ရတယ်။ အခုတော့လဲဗျာ ခဲရာခဲဆစ် ခိုးထားတဲ့ အကြွေစေ့လေးတွေ ဘတ်စကားခ ဖြစ်သွားပြီ။ နှမြောလိုက်တာ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:34 PM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:30 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မျိုးမျိုးခိုင် အနှုပညာရှင်များကို ၀န်ချတောင်းပန်ရ .......
အဆိုပါ နေ့က ရောက်ရှိလာသည့် သရုပ်ဆောင် အချို့
အခုတတော့ ပြင်ပမှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင်နန္ဒာလှိုင်နဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် မျိုးမျိုးခိုင်တို့ တယ်လီဖုန်းကနေ တစ်ဆင့် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေအတွက် မျိုးမျိုးခိုင်က ရုပ်ရှင်လောက သားများကို လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။
“ထိုမှားယွင်းစွာ ပြောဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါအနုပညာရှင်များမှာ များစွာ ထိခိုက်နစ်နာခြင်းများ ရှိခဲ့ပါသောကြောင့်ကျွန်မ အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်” ဟု ပါရှိသည့်တောင်းပန်လွှာကို ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး၊ သရုပ်ဆောင်များရှေ့တွင် သရုပ်ဆောင် မျိုးမျိုးခိုင်က လက်မှတ်ထိုး ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
www.yangonmedia.com ရဲ့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:14 PM7ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 7:55 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မှတ်မှတ်ရရ မယ်ဇယ်လီဖူးသုပ် မစားရတဲ့ တန်ဆောင်တိုင် တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် ဒီတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:28 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကောင်မလေးရေ . . ..
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:53 PM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:43 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ပန်းချီကားဆိုတာ ကြည့်တော့သာ လှတာ၊ အဲဒီ ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကားတွေ ဆိုတာက ကင်းဘတ်ပေါ်မှာ ဆေးရောင်ချယ် ထားတာလေ၊ တကယ်တော့ ကင်းဘတ် ဆိုတာ အဖြူရောင်ဗျ၊ အဲဒီ အဖြူရောင်ကို ဆေးရောင်တွေ ရေးခြယ်ရင်းနဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ပန်းချီကားတွေ ဖြစ်သွားတာ။ အဖြူ သက်သက် လှတာထက်စာရင် အရောင်ခြယ်ပြီး လှတဲ့ အလှတရားက ပိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။
ပြောရင်း ဆိုရင်း ဟေ့အရှေ့မှာ လူတစ်ယောက် ကင်းဘတ်စကြီး ကိုင်လို့ ပန်းချီဆွဲဖို့ လုပ်နေတယ်။ သေချာကြည့် လိုက်တော့ . . . .
`` ဟင် ´´
လီယိုနာဒိုဒါဘင်ချီ ကြီးပါလား၊ သူ့အရှေ့မှာ မိုနာလီဇာကြီးကို ငုတ်တုပ်ထိုင်ခိုင်းပြီး အဖြူရောင် ကင်းဘတ် ပေါ်မှာ ဆေးရောင် စုပ်တံတွေနဲ့ ပုံတူဆွဲနေလေရဲ့။ ရှေ့ဆက်သွားတော့ ဗင်ဂိုး နေကြာပန်း ခင်းထဲမှာ ပက်လက်ကြီး အိပ်ပြီး အဖြူရောင် ကင်းဘတ် ပေါ်မှာ အရုပ်တွေ ရေးနေတယ်၊ နေကြာပန်းခင်းကြီးကို ကျော်လာတော့ တဲပုတ်လေး တစ်ခုကို ရောက်တယ်။ အထဲမှာ လူရိပ်တွေ့လို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ပီကာဆိုကြီးဗျ၊ ဘာလုပ် နေတာလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ထမင်းချက်နေတယ်။ မီးဖိုဘေးမှာ ရေးလက်စ ပန်းချီကား တစ်ချပ်၊ အဖြူရောင် ကင်းဘတ်ပေါ်မှာ ဆေးရောင်တွေ ခြယ်ထားတယ် . . . .
နောက်ခြောက်လ လောက်ကြာတော့ လီယိုနာဒိုဒါဘင်ချီ ဗင်ဆင့်ဗင်ဂိုး ပီကာဆို တို့သုံးယောက်ပေါင်း ပြီး အကြီးအကျယ် အခန်းနား ဆုံးပန်းချီ ပြပွဲကြီး လုပ်ကြတယ်။ ဒိုင်ယာနာတောင် အဲဒီပန်း ချီပြပွဲကို ကြည့်ချင်ဇောနဲ့ ကားကို မိုင်ကုန်မောင်းရာက အရှိန်လွန်ပြီး အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်သွားတယ် ဆိုလားပဲ။ အဲဒီ ပန်းချီပြပွဲမှာ ပန်းချီကားတွေကို အဖိုးတန်ဆုံး ဈေးတွေနဲ့ ရောင်းကြတယ်။
ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာလည်း အဖြူရောင် ကင်းဘတ် တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီကင်းဘတ်ကို ဆေးရောင်ခြယ်ပြီး အလှဆုံး ပန်းချီကားလေး တစ်ခု ဖန်တီးချင်တယ်။ ကျွန်တော် ဖန်တီးမဲ့ ပန်းချီကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှဆုံး ပန်းချီကား ဖြစ်ချင်တယ်။ အဲဒီပန်း ချီကားကို ပြပွဲတင်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ် ရောင်းချဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ပြတိုက် ဖွင့်ပြီး ရာသက်ပန် သိမ်းထားဖို့ . . . .
အဲလိုနဲ့ ကာလာတွေ ရောင်စုံစပ်ရင်း ရင်ဘတ်ထဲက အဖြူရောင်ကင်းဘတ်ကို ဘ၀ထဲက ဆေးရောင်တွေ ခြယ်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်ပဲ မဆွဲတတ်တာလား ဆေးသားကပဲ မကောင်းတာလား ရင်ဘတ်ထဲက အဖြူရောင် ကင်းဘတ်လေးဟာ အမဲရောင် ဆေးတွေနဲ့ ညစ်ပေသွားတယ်။
ကျွန်တော် ကင်းဘတ် အသစ်တစ်ခု ထပ်ဝယ်ဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ၀ယ်မရတော့ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် ဆေးရောင်တွေ ခြယ်လို့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ကင်းဘတ်က ဈေးထဲမှာ အသစ်ထပ်ဝယ်လို့ရတဲ့ ကင်းဘတ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ်လေ။ အခုတော့လည်း ဆေးရောင်တွေ စွန်းထင်းကုန်ပြီ။ တကယ်ပါ ကျွန်တော် မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး ........
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:34 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အဲဒီကောင် သေသွားမှ သေချာ ကြည့်မိ လိုက်တယ် သူ့ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ကျွန်တော့် သွေးတွေ . . . .
ဘယ်နေရာမှာ လောင်နေမှန်း မသိတဲ့ မီးကို အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး မရှာတော့ဘူး၊ ဘယ်အချိန် ရွာမယ်မှန်း မသိတဲ့ မိုးကို အချိန်ကုန်ခံပြီး မစောင့်တော့ဘူး၊ ငါ့စိတ်တွေ ပြိုလဲ သွားအောင် ဘယ်လေတွေက တိုက်ခဲ့တာလဲ၊ တော်ပါပြီ ခေါင်းရှုပ်ခံပြီး မစဉ်းစားတော့ဘူး . . . . . .
ထားလိုက်ပါ အဲဒါတွေ ငါမသိချင်တော့ဘူး အခုဖြစ်ချင်တာက အိပ်ပျော်ဖို့၊ အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် ပုံပြင်ကောင်းကောင်း တစ်ပုဒ်ကို တမ်းတမိတယ် . . . .
ငါတောင်းတလို့လား မသိဘူး ငါ့နားမှာ ပုံပြင်တွေ လာပြောကြတယ်။ ပုံပြင်ရဲ့ နာမည်က `` ဟေ့ကောင်မင်းကို ငါသွေးစုပ်မယ်´´ တဲ့ ဘာသာစကားက တော့ တ၀ီဝီနဲ့ ပြောတယ်၊ အေးလို ချင်ရင်တော့စုပ်ကြပါ အဓီကက ပုံပြင်နားထောင်ဖို့လေ . . . .
အဲလိုနဲ့ ညတိုင်းညတိုင်း တ၀ီဝီ နဲပြောတဲ့ ပုံပြင်တွေကို နားထောင်ရင်း သွေးတွေ လှုခဲ့တာ ဘယ်နှစ်ဗိုက်စာ ဆိုတာတောင် ငါမရေနိုင်ဘူး၊ အင်းလေ သူတို့က အသက်နဲ့ ရင်းပြီး စီးပွားရှာရတာ မသကာ သေသွားတောင် အသက်အာမခံ ကြေးထုတ်ပေးမဲ့လူ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ရပါတယ် ကိုက်ကိုက် . . .
ငါ့စိတ်တွေ လဲပြိုအောင် တိုက်ခတ်သွားတဲ့ လေက ငါမမေးပဲ ပြောပြတယ် သူနာမည်က မောဟ တဲ့ ၊ မမျှော်တဲ့ မိုးက ရုတ်တရက်ရွာတော့ ငါ့ရင်ဘတ်ကို အအေးမိစေတယ် (အဲဒီနေ့က ထီးမယူလာ မိဘူးလေ)၊ နှလုံးသား တစ်ခုလုံး ပြာကျသွားမှ သိလိုက်တယ် ငါမရှာတဲ့ မီးက အဲဒီနေရာမှာ လောင်သွား တာပါလား . . .
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:58 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:26 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:39 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အစိမ်းဆုံးက လူကြည့် အများဆုံးပါ
အရင်က ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို လာကြည့်နိုင်ငံစာရင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက အများဆုံးပါ။ မြန်မာပြီးမှ စင်္ကာပူ ပြီးရင် ထိုင်း အဲဒါပြီးမှ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေလာပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဘလော့ဂ်တွေကို ပုဂံက ဘန်းလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး မြန်မာက ၀င်ကြည့်တဲ့လူတွေ လျှော့ကြသွားလိုက်တာ အခု နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပတ် အထိ ၀င်ကြည့်သူဦးရေဟာ မြန်မာက အဆင့်ငါးနေရာကို ရောက်သွားပါတယ်။
စင်္ကာပူက အဆင့်တစ်နေရာမှာရှိပြီ။ အမေရိကားက ဒုတိယနေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ဂျပန်ကတတိယပါ။ ထိုင်းကစတုတ္ထပါ ပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလာပါတယ်။ မြန်မာပြီး ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ ရုရှ ဂျာမနီ သြစတျေးလျှ မလေးရှား နဲ့ ပြင်သစ်တို့ အပါဝင် စုစုပေါင်း ၃၇ နှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:50 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကိုဖီအာနန်နဲ့ တူတယ်တဲ့ :P
ကျွန်တော်ရဲ့ မိုက်တိ မိုက်ကန်း ပုံကို ဘယ်သူနဲ့ တူသလဲ ဒီဝက်ဆိုက်မှာ စမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဒီလို အဖြေထွက်လာတယ်။
တူမတူကတော့ ကြည့်တဲ့သူတွေ ဆုံးဖြတ်ကြပေါ့နော့်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:20 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နံနံခင်း နေရောင်ခြည်သည် စူးရှစွာ တောက်ပသည်။ ထိုတောက်ပသော နေရောင်ခြည် တိမ်လွှာများကို ထိုဖောက်ကာ ကမ္ဘာမြေပေါ် ဖြန့်ကျလျှက်ရှိသည်။ ထိုဖြန့်ကျနေသော အလင်းရောင်ခြည်များထဲမှ တစ်ခုသည် ပြူတင်းပေါက်ကို ဖြတ်သန်း၍ ဧည့်ခန်းတွင် အိပ်ပျော်နေသည့် ကျွန်တော်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို ထိုးကျနေသည်။
နေရောင်သည် ပိတ်ထားသော မျက်ခွန်ကို ထိုးဖောက်ကာ ကျွန်တော့်မျက်လုံးကို စူးရှစေသည်။ ထိုစူးရှသော ဒဏ်ကို ကျွန်တော်မခံ သော်လည်း ညက အရှိန် မသေသေးသောကြောင့် ကျွန်တော်လုံးဝ မထချင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပေ၍ အိပ်မြဲအိပ်နေလိုက်၏။ များမကြာမှီ ထိုအလင်းရောင်နှင့် ညက ရီဝေသော အရှိန်များ ပေါင်းစပ်သွားကြတော့သည်။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို ၀င်ဖို့ တောင်မကျန်သေး ထိုအသံများကို ကြားရပြီ။ ထိုကြားနေရသော အသံသည် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်လာသလို ကျွန်တော် ခံစားရသည်။ သေချာခံစားကြည့် လိုက်တော့ . . . .
ထိုကြောင့် မူးနေသော အရှိန်ကို အဆုံးသတ်။ နားငြီးစေသော ထိုအသံပြုသူကို ရင်ဆိုင်ဖို့ တခါးကို ၀ုန်းကနဲ ဆွဲဖွင့်လိုက်သည်။
မြင်ရသည့် မြင်ကွင်းကား ကျွန်တော်လုံးဝ မယုံနိုင်ပါ။ အိမ်ရှေ့တွင် ကောင်မလေးတစ်ယောက် အနီရောင် တရုတ် ရိုးရာ ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး လည်ပင်းတွင် တရုတ် ဗုံတစ်လုံးကို လွယ်ထားသည်။ လက်နှစ်ဖက်တွင် ဗုံတီးတံ နှစ်ချောင်းကို ကိုင်ထားသည်။
ကျွန်တော်က ဘာလုပ်တာလို့ မေးတော့ သူသဘောကျစွာ ပြုံးပြသည်။ သူ့ အပြုံးတွင် ပါးချိုင့်လေးတစ်ခု ပေါ်သွားသည်။ ထိုပါးချိုင့်လေးက အခြားမဟုတ် တချိန်က ကျွန်တော်နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ ဖူးသော ပါးချိုင့်လေးဖြစ်သည်။ အခု တော့ ပါးချိုင့်လေး ပိုင်ရှင်သည် တရုတ်ဗုံတစ်လုံးကို ပိုက် တရုတ်လို ၀တ်ပြီး ကျွန်တော့် အိမ်ရှေ့ရောက်နေပြီ။ အကြောင်းရင်းကိုကား မသိရသေး။
ကျွန်တော်က ``ညီမက တရုတ်လူမျိုး မဟုတ်ပဲ ဘာဖြစ်လို့ အဲလိုကြီး ၀တ်လာတာလဲ´´ လို့မေးတော့
``ဒါတ တရုတ်တွေချုပ်ပြီး တရုတ်တွေ ၀တ်ကြလို့ တရုတ်အင်္ကျီလို့ ခေါ်တာ တကယ်တော့ အ၀တ်စတွေကို ချုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်ပါပဲ ဘယ်သူမဆို ၀တ်လို့ရပါတယ်´´ တဲ့လေ။
ကောင်မလေးရေ ငါနင်နဲ့ တုဖက်ပြီး စကားမများချင်ပါဘူး လာရင်းကို ပြောဆိုတော့။ ဗုံတီးမလို့တဲ့ ဆိုပြီး လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားတဲ့ ဗုံကို သူလက်ထဲက ဗုံတီးတံနှစ်ချောင်းနဲ့ တီးပါလေရော။ သူဗုံကိုလဲ တီးလိုက်ရော ဗုံသံတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်။ သူရဲ့ ဗုံတီးပုံက ညင်သာပြီး ထွက်လာတဲ့ အသံတွေက နားထဲမှာ သာယာသလိုပဲ။ ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီဗုံသံကို နှစ်သက်တယ်တဲ့လေ။ထူးခြားတာက သူတီးလို့ မြည်သွားတဲ့ ဗုံတီးသံက ကျွန်တော့် နား မှာ ချိုသလောက် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်မှာ နင့်နေအောင်ခံစားရတယ်။ ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲလို့ ကောင်မလေးကို မေးကြည့်တော့ . . . .
သူတီးနေတာ ဗုံမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကြီးတဲ့လေ။ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ရင်ဘတ်မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်ရောက် သွားတာလဲလို့ ရှာလိုက်တော့ ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ကြီးက သူ့လက်ထဲမှာ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကြီးကို ကိုင်ပြီး ဗုံတီးတံနဲ့ အားရပါရ ခေါက်နေလေရဲ့။
ကောင်မလေးရယ် နင်ကတော့ အဲဒီအသံတွေကို သာယာတယ်ဆိုပြီး နားထောင် နေတာပေါ့လေ။ ကောင်မလေးရေ နင်ပျော်တယ်ဆို ရင်တော့ ဆက်တီးပေါ့။ ငါမတားပါဘူး။ ငါ့ရင်ဘတ်တွေ အကွဲခံလိုက်ပါမယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကောင်မလေးရယ် ..........
အဲဒီလို နင်သာယာပါတဲ့ ဆိုတဲ့ အသံတွေက ငါ့ရင်ဘတ်ကြီး ကွဲလုအောင်ခံစားပြီးမှ ထွက်လာတဲ့ ရင်ကကွဲတဲ့ ရင်ကွဲ သံစဉ် တွေပါ။ နင်စိတ်ကြိုက်တာ တီးလိုက်ပါ။ ငါ့ရင်ဘတ်ကို အကွဲခံလိုက်မယ်။ အဲဒီအသံတွေကို နင် မရိုးသေးတဲ့ အချိန်ထိပေါ့ . . .
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:23 AM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
သြော်...... ငါ့ကို တိုက်ခိုက်ကြပြီပေါ့လေ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:30 AM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က exe ဖိုင်လေးပါ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပျင်းတော့ ပြေပါတယ်
ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ပေါ်လာတဲ့ အကွက်မှာ ကိုယ်နာမည်ကို ရိုက်လိုက်
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုနေဘုန်းလတ် နံမည်ကို ရိုက်လိုက်တယ် :P
အဲဒီကောင်ကို ဒီနေရာကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:25 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:58 AM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဓူဝံကြယ်ကို တောင်ဘက်အရပ်ရောက်အောင် ရွှေ့ပြနိုင်စွမ်းမရှိဘူး
ရာဇ၀င်တွေထဲမှာလို သမုဒ္ဒရာကို လက်ပစ်မကူးနိုင်ဘူး
အဲဒီအတွက် ငါ့ရဲ့အချစ်တွေကို အတုလို့များပြောမလားကွယ်
မျက်မမြင်ဟာ အလင်းရောင်ကို မမြင်နိုင်ပေမယ့်
နယူတန်ဟာ ကမ္ဘာဆွဲအားကို သက်သေပြဖို့
ပိုက်သာဂိုရက တြိဂံသီအိုရီကို သက်သေပြဖို့
ငါကတော့ နင့်ကိုချစ်ကြောင်း သက်သေပြဖို့
အဲဒီရင်ခုန်သံတွေက ငါ့ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်သွားတာလေ
အဲဒါ ငါ့အချစ်ရဲ့ သက်သေပေါ့
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:14 AM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ကိုစစ်အိမ် ရဲ့ မွေးနေ့မှ သည် နောင်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမှုပေါင်း များစွာဖြင့် ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:16 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က အမေ ပြောပြသော ပုံပြင်များကို နားထောင်ရသည်။ ကျွန်တော်နား ထောင်သောပုံ ပြင်များထဲတွင် ဒေ၀ဒတ်ဆိုသော အမည်ကို ကြားပါများ၍ နားထဲစွဲလာသည်။ထို့ကြောင့် “ ဒေ၀ရဒတ် လုပ်ရပ်တွေ မှားနေရာက အမြင်မှန်တစ်ခု ရလာအောင် ဘုရား တရားဟောလို့ မရဘူးလား ” မရဘူးလားလို့ မေးကြည့်မိပါတယ်။
လွဲမှားတဲ့ အယူဝါဒရှိတဲ့ လူကို ထောင်ပေါင်းများသော ဘုရာတွေ ချွတ်ပေမယ့် မကျွတ်နိုင်ဘူးလို့ အမေက ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။
တစ်ခါတုန်းက တရုပ်ပညာရှိကြီး ကွန်ဖြူးရှပ် မြို့အတွင်းသို့ ဖြတ်သွားခိုက်မှာ လမ်းဘေးမှာ ကစားနေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်က ကွန်ဖြူရှပ်ကို တွေ့သွားတယ်။ ကွန်ဖြူရှပ်ကိုလဲ တွေ့ရော ကလေးနှစ်ယောက်က ပြေးလိုက်သွားပြီး ..........
“ ပညာရှိကြီး ရပ်ပါဦး ၊ မေးစရာလေး ရှိလို့ပါ ” လို့ပြောသတဲ့
အဲဒီမှာ ကွန်ဖြူရှပ်က ရပ်ပြီး ကလေးတွေကို မေးလိုလျှင်မေးဖို့ ပြောတယ်။ အဲဒီမှကလေးတွေက
“ နေဟာ ထွက်ခါစမှာ အကြီးကြီး ဖြစ်နေပြီး နေ့လည်ရောက်ရင် ဘာဖြစ်လို့ သေးသွားရတာလဲ” လို့ မေးတယ်တဲ့
အဲဒီမှာ ကွန်ဖြူရှပ်က ပြန်ပြောလိုက်တယ်
“ မနက်ခင်းမှာ နေဟာ ကမ္ဘာနဲ့ ပိုနီးလို့ အကြီးကြီး မြင်ရပြီး နေ့လည်ခင်းမှာ ဝေးသွားတဲ့ အတွက် သေးသေးလေး မြင်ရတာပါ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်တဲ့
အဲဒီတော့ ကလေးတွေက ကွဖြူရှပ်ကို မေးခွန်းပြန်မေးတယ်
“ နေဟာ ကမ္ဘာနဲ့နီးတဲ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ မပူပဲနဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ သေးသွားတဲ့ နေ့ခင်းပိုင်းရောက်မှ ဘာဖြစ်လို့ ပိုပူရတာလဲ” လို့ ထပ်မေးတယ်
အဲဒီမှာ ကွန်ဖြူးရှပ်က ဘာမှ မဖြေနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ကလေးတွေက အလကား ပညာရှိကြီးပါ ဘာမှလဲ အသုံးမကျပါဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကွန်ဖြူးရှပ်က ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ထွက်လာခဲ့တယ် ။
ကျွန်တော်နယ်မှာ နေတုန်းက စာပေ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ပေါင်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုမှာ လူငါးယောက် လောက်ရှိတယ်။ အားလုံးက ဆယ်တန်းစားမေးပွဲလဲ ပြီးစ ဘာအလုပ်မှလည်း မရှိဆိုတော့ စာအုပ်ဆိုင်သွားလိုက် ငြင်းလိုက်ခုန်လိုက် ပေါ့။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ငြင်းခုန်ရတာ ၀ါသနာပါသလို သူငယ်ချင်းတွေလဲ ငြင်းခုန်ရတာ ၀ါသနာပါကြတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စာအုပ်ငှားဖတ်လိုက် ငြင်းလိုက်ခုန်လိုက်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် အဲလို ငြင်းခုန်ကြတဲ့ထဲမှာ အများစုက အထောက်အထားနဲ့ ခိုင်ခိုင် မာမာငြင်းကြတယ်။ ကိုယ်အရင်က မှန်တယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ အရာတစ်ခု မှားနေပါလို့ အထောက်ထားနဲ့ သိလိုက်ရင် လက်ခံကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ထဲက တစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်လောက် အထောက်ထားတွေ ပြပြ။ ဘယ်လောက်မှန် နေပါစေ။ သူအရင် စွဲကိုင်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုကလွဲရင် ဘာကိုမှ လက်မခံဘူး။ ဥပမာ ပြောရရင် ဟစ်တလာဟာ ဂျူးတွေကို လူမျိုးသုန်း လိုက်သတ်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတာကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ငြင်းတဲ့လူပေါ့။
ဟေ့ဒီမှာ သမိုင်း အထောက်ထားတွေရှိတယ် ရက်ကော့တွေရှိတယ်။ ဒါဟာ အစစ်မှန်ပဲလို့ပြောရင်။ ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး သမိုင်းဆို လိမ်ရေးလို့ ရတာပဲလို့ ငြင်းတဲ့လူစားမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို ငြင်းကြရင်းနဲ့ သူက အများနဲ့ တစ်ယောက်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝအလျော့မပေးဘူး သူအမှန်ပဲ။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ငြင်းကြရင်းနဲ့ ဆွဲထိုးကြမလို ရန်ဖြစ်ကြမလို ဖြစ်တာလဲ အကြိမ်ကြိမ်ပေါ့။
နောက်တော့ အားလုံးက သူ့နဲ့ တုပပြီး မငြင်းကြတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တကယ်ဖြစ်နေတာ အားလုံးလဲ သိနေတာပဲ။ အဲဒါကို မဖြစ်ပါလို့ ငြင်းနေမှတော့ အဲဒါကို အဖက်လုပ်ပြီး ဆက်ငြင်းနေရင် ဘာမှလဲ အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်သလို စကားများရတာလဲ အလုပ်ပိုတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ သူဘာပြောပြော အားလုံးက မပြောပဲနဲ့ လွတ်ထားလိုက်ကြတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက တုပ မငြင်းချင်လို့ ပစ်ထားလိုက်တာကို သူ့ကိုသူ ဟုတ်လှပြီးဆိုပြီး စိတ်ကြီးဝင်နေလေရဲ့
တကယ်တော့ ကျွန်တော် ပတ်ဝန်း လူနေမှု အရ၊ လူဆိုတာ အမှားနှင့် မကင်းနိုင်ဆိုသလို အငြင်းနဲ့လည်း ကင်းနိုင်ကြသူများ မဟုတ်ကြပါ။ ကိုယ့်အဖွဲ့စည်း အတွက်သော်လည်ကောင်း ကိုယ့်ဘ၀အတွက်သော် လည်းကောင်း ကိုယ့်အယူအဆတစ်ခု တည်မြဲရေး အတွက်သော်လည်းကာင်း ငြင်းခုန်ကြရသည်။
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်ကလည်း ငြင်းသည် အခုလည်း ငြင်းသည်။ ဒါပေမယ့် ငြင်းပုံခြင်းကား မတူတော့ပေ။ ငယ်စဉ်က ကိုယ်မှန်တယ် ထင်လျှင် အလျော့မပေးပဲ ရန်ပဲဖြစ်ရ ဖြစ်ရ ထပဲ လုံးရလုံး အလျော့ပေးသည်ဟူ မရှိ။ ယုခုအခါတွင် တချို့သော ကိစ္စများကို မငြင်းလိုတော့ပါ။ ဥပမာ အနေဖြင့် ပြောရလျှင် ဂျော့ဘုဘ် သည် တနင်္လာသား ဖြစ်သည် သောကြာသား ဖြစ်သည် အစရှိသဖြင့် ဘာနေ့သားဖြစ်သည်ကို သမိုင်းသုသေသီ တွေအတွက် ရေးပါလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ သာမန်လူများအတွက် သူ့ဖာသာသူ သောကြာနဲ့ စနေစပ်ကြားမှာ မွေးတဲ့လူ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ အတွက်အရေးမပါ။ ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်ခံ လေကုန်ခံ ငြင်းနေပါက ဘာမှ အကျိုးထူးလာမည်ကား မဟုတ်။ စောစောက သူငယ်ချင်း ငြင်းသလို ဟစ်တလာဟာ ဂျူးတွေကို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ပါဆယ်ဆိုတာကို တကမ္ဘာလုံးကို သိနေတဲ့ ကစ္စကြီးတစ်ခုကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောသူတစ်ယောက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူး မငြင်းချင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မှန်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ခေါင်းမာသူတစ်ယောက်နဲ့ ငြင်းခုန်ရခြင်းရခြင်းသည် မည်သို့မျှ အကျိုးထူး လာနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။